Friday October 21, 2016 - 06:47:47 in Wararka by
Dowladda Federaalka iyo Q.Midoobe ayaa markii ay ku fashilmeen qaban qaabinta doorashooyinka qof iyo cod waxay bilaabeen in ay magacyo cusub kusoo kordhiyaan hab dhismeedka dowladda Federaalka oo muddo kabadan 10 sanadood laheyd gole baarlamaan oo qaab beeleed lagusoo xulay.
Aqalka sare iyo aqalka Hoose waa musdhalax gumeysi oo lagasoo minguuriyay wadamada Ingiriiska iyo Mareykanka oo hanaankaasi kusoo dhaqmayay ku dhawaad 100 sanadood.
Aqalka sare dowladdii ugu horraysay ee isticmaashay waa ingiriiska waana hab loogu talagalay in lagu uruuriyo khubarada howlgabka ah ee horay usoo shaqeeyay sida ciyaartooyda,saraakiisha ciidanka howlgabka ah iyo siyaasiyiin.
Aqalka hoose ayaa isna ah mid magac uyeel ah oo lagasoo minguuriyay dhanka Mareykanka inkastoo markii dambe Mareykanka uu u rogtay aqalka sare golaha odayaasha, waa odayaal guri ladajiyay oo marwalba dhaqaale ku baxo waxa ay qabtaana ay iska yartahay.
Waxaa xusida mudan in dhammaan labada gole ee dowladda Federaalka ay hadda ku mashaquulsantahay lagusoo xulayo qaab beeleed iyo lacago laaluush ah waana arrin aan ka duweyn qaabkii hore marka laga reebo iyo magacyo cusub loo bixiyay si ra'yul caamka soomaalida loo jiha wareeriyo.
Aqoonyahan Idiris Xasan Faarax oo kamid ah waxgaradka Soomaaliya ayaa ka hadlaya aqalka sare iyo aqalka hoose waxa loogu magac daray ee maamul goboleedyadu dooranayeen maalmihii lasoo dhaafay.
Idiris oo wareysi siiyay idaacadda Alfurqaan wuxuu sheegay in tani tahay falsafad gumeysi oo waqtiga uun loogusii dheeraynayo soomaalida isagoo rajeeyay in waxba aysan soo kordhin doonin hanaanka cusub ee gumeystuhu ku maaweelinayo soomaalida.
Wuxuu carrabka ku adkeeyay in dhaqaalaha ku baxaya dhismaha golayaasha "aqalka Hoose" iyo "Aqalka Sare" ay dhaqaale ku bixinayso beesha caalamka islamarkaana mushaaraadka shakhsiyaadka golayaashaasi kujira mushaarkooda laga sugayo dowlado shisheeye taasi oo ka dhigan in ay cadawga umadda u shaqeynayaan.
Halkan ka dhageyso Wareysiga Idiris Xasan Faarax MP3
Dhageyso: Xalqada 11aad Ee Barnaamijka Halgankii Daraawiishta Sayid Max'med Cabdulle Xasan.